नेदरल्याण्ड्समा यसरी भएको छ, यौन व्यवस्थापन « Mero LifeStyle
रोजिता बुद्धाचार्य	|| 14 April, 2021
युएनएड्स संस्थाका अनुसार नेपालमा करिब ६७ हजार ३ सय यौनकर्मीहरू यौन व्यवसायमा सक्रिय छन् । अर्को एक अध्ययनका अनुसार काठमाडौंका ठमेल, नयाँ बसपार्क, रत्नपार्क, गौशाला तथा पोखरा, इटहरी, बिर्तामोड, धरान, बुटवल र काँकडभित्ता नेपालका दश प्रमुख स्थान हुन्, जहाँ यौन व्यवसाय सञ्चालित छन् ।
तर नेपालमा यौनकर्मी हुनु नेपालको संविधानअनुसार अवैध हो । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) सम्बन्धी कानून, २०६४ अनुसार यौन व्यवसाय तथा यसबाट अर्थोपार्जन गर्नु कानून विपरित हो । मूलतः नेपाल मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको निम्ति स्रोत, ट्रान्जिट तथा केन्द्र हो । त्यसै कारणले यस किसिमको कानून बनाइएको हो । त्यसो भए कानून एकातिर अनि यथार्थ अर्कोतिर कसरी र किन रह्यो ?
यस लेखमा मैले नेदरल्याण्ड्समा देखेको अनुभव राख्न चाहें । अमेरिकी मानवबेचविखन नियन्त्रण तथा अनुगमन विभागले प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गर्ने रिपोर्टअनुसार नेदरल्याण्ड्स टायर १ मुलुक हो भने नेपाल टायर २ मुलुक हो । बेचविखनमा परेका उत्पीडितहरूको सुरक्षार्थ अपनाइएका नीति, कार्यक्रम तथा तर्जुमाका आधारमा टायर १ सुरक्षित मुलुक मानिन्छ । त्यसो भए के यहाँ यौनव्यवसाय पूर्ण रूपमा बर्जित हुनुपर्छ ? होइन, यहाँ बाटो–बाटोमा उभिएर वा सार्वजनिक स्थानमा यौन व्यवसाय गर्नु चाहिं कानून विपरित हो । तर, निर्धारित क्षेत्रमा कानूनी दायरमा रही पूर्ण वयस्क व्यक्तिले स्वेच्छाले यौन व्यवसाय गर्नु वा यौनकर्मी हुनु भनेको एक किसिमले पेशा नै हो । डाक्टर, इन्जिनियर, राजनितिज्ञ, सरकारी कर्मचारीजस्ता अन्य व्यवसाय वा पेशाजस्तै समान पेशा हो । न्याय तथा सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने यस पेशामा संलग्न यौनकर्मीको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति नै नेदरल्याण्ड सरकारको एक प्रमुख एजेण्डा हो ।
अझै रोचक कुरा यहाँ ग्राहकको रोजाइभन्दा पनि यौनकर्मीको रोजाइ महत्वपूर्ण हुन्छ । उनले ग्राहकलाई मजाले अस्वीकार गर्न पनि पाउँछिन् ।
रातो र नीलो बत्ती
एक अध्ययनअनुसार नेदरल्याण्ड्समा करिब २५ हजार यौनकर्मीहरू यौन व्यवसायमा सक्रिय छन्, जसमध्ये ९० प्रतिशत महिला, ५ प्रतिशत पुरुष र ५ प्रतिशत ट्रान्सजेन्डर छन् । यी सबैको कार्यस्थल रेडलाइट एरिया हुन्, जहाकाँ रातो पर्दा लगाइएका घरहरूमा मात्र यिनले कार्य गर्न सक्छन् । सामान्यतयाः राती ११ बजेदेखि बिहान ३ बजेसम्म अफिस आवर हुन्छ । त्यहाँ रातो बत्ती बलेको क्षेत्र महिला यौनव्यवसायी र नीलो बत्ती बलेको क्षेत्र ट्रान्सजेन्डर यौनकर्मीका लागि भन्ने बुझिन्छ । तर रोचक कुरा रेडलाइट एरिया पनि सार्वजनिक स्थान नै भएका कारणले यहाँ पनि बाटोमा वा सार्वजनिक स्थलमा यौन व्यवसाय गर्न पाइँदैन ।
सम्बन्धित यौनकर्मीहरू निर्धारित सिसाको झयालभित्र बसिरहेका हुन्छन्, जसलाई विन्डो प्रोस्टिच्यूशन भनिन्छ । सेवाग्राही वा ग्राहकले झ्यालबाहिरबाट अवलोकन गरी उपयुक्त यौनकर्मीलाई प्रस्ताव गर्न सक्छन् । अझै रोचक कुरा यहाँ ग्राहकको रोजाइभन्दा पनि यौनकर्मीको रोजाइ महत्वपूर्ण हुन्छ । उनले ग्राहकलाई मजाले अस्वीकार गर्न पनि पाउँछिन् । औसतमा १० देखि १५ मिनेट सेवा प्रदान गरेबापत् ५० युरो शुल्क लिन्छन् । तर कति समय र कति शुल्क भन्ने कुरा सेवाग्राही र सम्बन्धित यौनकर्मीबीचको मोलमोलाईमा भरपर्छ । यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा यस व्यवसायमा यौनकर्मीहरू स्वरोजगार हुन् । उनीहरू २१ वर्ष भन्दा माथिका वयसक हुन् । र, उनीहरूले काम गर्ने हरेक घरमालिकले सो प्रयोजनका निम्ति सरकारद्वारा लाइसेन्स प्राप्त गरेका हुन्छन् । यौनकर्मीहरूको फोटो वा भिडियो खिच्न पाइँदैन ।
यौनकर्मीहरूलाई उनीहरूको अधिकार र कर्तव्यबारे सूसुचित गर्ने तथा पेन्सन र बिमा तथा नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
सबैभन्दा पुरानो र प्रसिद्ध रेडलाइट डिस्ट्रिक्ट राजधानी एम्टरड्याममा अवस्थित डि वालेन हो, जुन यौन पर्यटनका निम्ति अन्तर्राष्र्टिय गन्तव्य हो । यहाँ क्लब, पब, यौन इतिहास सम्बन्धि संग्रहालय, इरोटिक थियटर हाउस र चर्च पनि आकर्षण्ँका केन्द्र हुन् । मुख्य शहरको केन्द्रमै रहेको यस क्षेत्रलाई अब भने सहरको अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने भनिएको छ, कारण पर्यटकहरूको अभद्र व्यवहार र फोहोरमैला ।
अन्य पेशामा संलग्न नागरिकहरूले जस्तै यौन व्यवसायमा लागेका यौनकर्मीहरूले पनि सरकारलाई कर बुझाउँछन् । त्यसैले, डच सरकारले उनीहरूको सुरक्षार्थ पुलिस पहरेदार तैनाथ गरेको हुन्छ । हिंसा वा दुव्र्यवहारसम्बन्धि प्राप्त उजुरीको कडाइका साथ छानबिन गरी दोषिलाई कार्बाही गर्छ । यौनकर्मीहरूलाई उनीहरूको अधिकार र कर्तव्यबारे सूसुचित गर्ने तथा पेन्सन र बिमा तथा नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था पनि गरेको छ । साथै, कोही यौनकर्मीले सो पेशा त्यागी अन्य काम गर्न चाहेको अवस्थामा सरकारले उनीहरूलाई लाइफकोचको व्यवस्था गरेको छ । ती व्यक्तिहरूको नयाँ घर वा नयाँ काम र अफिस खोज्न सहजीकरण गरिन्छ । लिभिङ द लाइफ प्रोग्राम्स डिसेन्ट्रलाइजेशन ग्रान्टअन्तर्गत १८ ओटा नगरपालिकामा यस्तो व्यवस्था छ ।
त्यति मात्र होइन, हरेक यौनकर्मीले अनिवार्य रूपमा वर्किङ पर्मिट लिनैपर्छ, नभए यौनकर्मी मात्र होइन, उनका सेवाग्राहीले पनि सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले मात्र होइन, सामाजिक व्यवस्थाले पनि ती यौनकर्मीहरूको सम्मान र समान व्यवहार गर्न सिकाउँछ । यदि कुनै यौनकर्मीमाथि दुब्र्यवहार भएमा छरछिमेकका स्थानीय बासिन्दा, क्याफे वा अन्य पसलका व्यवसायीले साक्षीको रूपमा यौनकर्मीको साथ दिन्छन् ।
समाजमा दिनानुदिन भइरहेको यथार्थलाई देखे पनि नदेखेझैं गर्नु पनि समाधान होइन रहेछ । कानूनले रोक लगाउने मात्र होइन, अवसर सिर्जना गर्ने र स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्ने रहेछ ।
मैले नेपालमा भोगेको र यहाँ नेदरल्याण्ड्समा देखेको अनुभवलाई एकै ठाउँमा राख्ने हो भने समस्याको जरा गरिबी हो । तर, अशिक्षा मात्र पनि होइन रहेछ । शिक्षासँगै चेतनाको विस्तार, समस्याको गहन अध्ययन र विश्लेषण र समावेशी सम्भावनाहरूको पहिचान तथा सामाजिक सुव्यवस्था पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुने रहेछ ।
समाजमा दिनानुदिन भइरहेको यथार्थलाई देखे पनि नदेखेझैं गर्नु पनि समाधान होइन रहेछ । कानूनले रोक लगाउने मात्र होइन, अवसर सिर्जना गर्ने र स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्ने रहेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यी विषयमा बोल्नु, छलफल गर्नु, भएका भ्रमलाई चिरी यथार्थपरक दृष्टिकोणको विकास गर्नु, बहस गर्नु र रोगी मानसिकताबाट मुक्त हुनु जरुरी छ ।
यो रोगी मानसिकताको अर्को एक मुख्य कारण सेक्स एजुकेशनको अभाव वा यससम्बन्धि चेतनाको अभाव हो । तपाईं वा मेरो मात्र होइन, यो पृथ्वी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमै एक मात्र जीवित ग्रह हुनुको अर्थ नै पाठेघर हो । तर, हामी त्यही पाठेघरको कुरा गर्न बर्जित ठान्छौं, त्यही पाठेघरको आवाज सुने नि नसुने झैं गर्छौं ।
विवादित नेपाली कानूनको अर्को प्रसंग
करिब दुई महिना अघिको कुरा हो । अध्यागमन विभागले एक नयाँ नियम प्रस्ताव गर्यो, ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले भिजिट भिसामा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा परिवारका सदस्यको मन्जुरीनामा सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट सिफारिस गराउनुपर्ने । कारण, मुख्यतयाः ४० वर्षभन्दा मुनिका महिलाहरू बेचविखनको बढी जोखिममा हुन्छन् ।
यस सवालमा मलाई असाध्यै दुःख लागेको दुई वटा कारण, एक नेपालजस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक महिला प्रमुख भएको राज्यव्यवस्थामा महिला अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक मात्र हो भन्ने दरिद्र मानसिकताको प्रस्तुति । र, दोस्रो ४० बर्ष नै हदम्याद राख्नु भनेको महिलालाई उपभोग्य वस्तुकै रूपमा बुझिनु ।
मेरो बुझाई मुख्य समस्या यही दरिद्र मानसिकता हो । र, यो यस्तो मानसिकता हो कि भलै घरको भित्तामा विद्यावारिधिको उपाधि सजाइएको होस् । वा, दुई चार मानिस सामु महिला अधिकारका ठूल्ठूला दफा उपदफाको २४ घण्टे गफ दिन सक्ने होस् । तर बिहान उठ्ने बेला आमा, श्रीमती, बुहारी वा छोरीले नै चिया पकाउनुपर्ने वा टक्र्याउनुपर्ने चाहे त्यो पुरुष होस् वा महिला ।
जबसम्म हरेक महिला आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुँदैनन्, हरेक सरकारी कामकाजदेखि अत्यावश्यक कुरामा आफै बोल्न, लेख्न र निर्णय लिन सक्ने व्यक्तित्व विकास हुँदैनन्, तबसम्म यो रोगी मानसिकता निको हुँदैन । यो रोगी मानसिकताको अर्को एक मुख्य कारण सेक्स एजुकेशनको अभाव वा यससम्बन्धि चेतनाको अभाव हो । तपाईं वा मेरो मात्र होइन, यो पृथ्वी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमै एक मात्र जीवित ग्रह हुनुको अर्थ नै पाठेघर हो । तर, हामी त्यही पाठेघरको कुरा गर्न बर्जित ठान्छौं, त्यही पाठेघरको आवाज सुने नि नसुने झैं गर्छौं ।
सायद नेदरल्याण्डले महिलाको त्यही आवाज आत्मसाथ गर्न सक्छ ।
(लेखक बुद्धाचार्य अध्ययनको सिलसिलामा नेदरल्याण्ड बस्दै आउनुभएको छ ।)
मेक्सिकोबाट अवैध रूपमा यसरी अमेरिका छिर्छन् नेपाली « Mero LifeStyle
‘कुनै नेपालीले नपाएको सम्मान बुबाले पाउनुभयाे’ « Mero LifeStyle